अघि बढ्यो मेलम्ची |
Thursday, November 7, 2019 । मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक
राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पर्ने सो आयोजनाको बाँकी भनिएको पाँच प्रतिशत काम १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने एक सम्झौतामा सरकारले दुई महिना अघि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिले नयाँ ठेकेदार कम्पनीले नयाँ उत्साहका साथ काम थालेकाले ती काम छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएकी छिन् । आयोजनामा कामको प्रगति बुझ्न बुधबार यहाँ आइपुग्नु हुँदा मन्त्री मगरले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो उत्साहका साथ पूर्वाधारको तयारीमा जुटिरहेको बताइन् ।
काठमाडौँका जनताले भोग्दैआएको खानेपानीको अभाव पूरा गर्ने यो आयोजनाको निर्माणमा धेरै समय लागिसकेकाले अब थप लम्बाउन नदिने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाइन् । स्थलगत अवलोकन पछि मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी काम समयमै सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार सुरुङ लामै भए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यो संरचना त्यति भने जटिल छैन । उनले भने – “समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वास गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।”
कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले लाभांश दिने गरी सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । योजना मुताबिक काम अघि बढे वर्षा अघि नै नदीमा बाँध बाँध्ने काम सम्पन्न हुनेछ । हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कोपिला पण्डितले सङ्घीय सरकारले मेलम्चीसम्म मात्रै नभएर हेलम्बुसम्मैको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताइन् । हेलम्बुलाई मेलम्ची प्रभावितमा ‘क’ मा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भनिन्– “काठमाडौँवासीले पानी पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौँ तर, हामीलाई पनि असर पर्नु हुँदैन ।”
आयोजनाका जम्माजम्मी कामलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ – हेडवर्क, सुरुङमार्ग र प्रशोधन केन्द्रको निर्माण । यसमध्ये हेडवर्क र सुरुङमार्गको काम सिनो हाइड्रोले गर्ने भएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माण दुई कम्पनीले गरिरहेका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा पहिले धेरै अवरोध भए पनि अहिले अवरोध कम भएकाले तोकिएको अवधिभित्रै काम सकिने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर पन्तले बताए ।
सिएमसीले काम छाडेर गए पनि उसले सहायक ठेकेदारलाई रकम दिन बाँकी छ र यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । पन्तका अनुसार हेर्डवर्कमा भौतिक अवरोध कमै मात्र रहेको छ । पहिले गिट्टी, बालुवा आपूर्ति, रुख कटान, चट्टान विस्फोटन जस्ता धेरै अवरोध थिए । उनले भने – “अहिले काम नै अवरुद्ध हुने गरी समस्या आएको छैन ।”यहाँ रहेका खानेपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता पन्तले बताए ।
दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने गरी सुन्दरीजलमा दुई वटा ट्याङ्की राखिने छन् । एउटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्काे ट्याङ्कीको निर्माण केही समयमै सम्पन्न हुने बताइएको छ । प्रत्येकको क्षमता साढे आठ करोड लिटर रहेको छ । एउटाको जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) र अर्काे एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो । एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन ट्याङ्कीको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ । यसको ठेक्का सम्झौताको अवधि गत महिना सकिएको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै सिएमसीले छाडेर गएका कतिपय निर्माणका काम गर्न दिइएकाले तीन महिना अवधि थपिएको छ । पन्तले भने– “अबको दुई–तीन महिनामा सबै काम सक्ने देखिएको छ ।”
मेलम्ची नदीमा बाँध बाँध्ने काम र स्टिलको पुल बनाउने काम बाँकी छन् । विद्युतीय प्रणालीबाटै विभिन्न ढोकाहरु खोल्ने र लगाउने गरी निर्माण भइरहेका छन् । ढोकाको डिजाइन, निर्माण र जडानका काम झण्डै पाँच प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको छ । टनेलमा भुईँ ढलानको काम दुई दशमलव पाँच किलोमिटर र भित्ता ढलान दुई दशमलव पाँच किलोमिटर बाँकी छ । टनेलभित्र हावा प्रवाह नहुँदा पानी नबग्ने भएकाले तीन वटा ‘भेन्टिलेटर’ निर्माण गर्ने डिजाइनमा रहेको बताइएको छ । तीनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भइसकेको र एउटा सम्पन्न हुन बाँकी छ । खेर जाने पानीलाई बागमतीमा खसाल्न बागमतीमा भ¥याङ जस्तै संरचना बनाइने पन्तले जानकारी दिए । एकै पटक छाड्दा खोलाको पानी धमिलिने हुँदा बहाव कम गर्न भ¥याङ जस्तै संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । यहाँ रहेका खानेपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता पन्तले बताए ।
दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने गरी सुन्दरीजलमा दुई वटा ट्याङ्की राखिने छन् । एउटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्काे ट्याङ्कीको निर्माण केही समयमै सम्पन्न हुने बताइएको छ । प्रत्येकको क्षमता साढे आठ करोड लिटर रहेको छ । एउटाको जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका) र अर्काे एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो । एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधीन ट्याङ्कीको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ । यसको ठेक्का सम्झौताको अवधि गत महिना सकिएको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीलाई नै सिएमसीले छाडेर गएका कतिपय निर्माणका काम गर्न दिइएकाले तीन महिना अवधि थपिएको छ । उनले भने – “अबको दुई–तीन महिनामा सबै काम सक्ने देखिएको छ ।”
मेलम्ची नदीमा बाँध बाँध्ने काम र स्टिलको पुल बनाउने काम बाँकी छन् । विद्युतीय प्रणालीबाटै विभिन्न ढोकाहरु खोल्ने र लगाउने गरी निर्माण भइरहेका छन् । ढोकाको डिजाइन, निर्माण र जडानका काम झण्डै पाँच प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको छ । टनेलमा भुईँ ढलानको काम दुई दशमलव पाँच किलोमिटर र भित्ता ढलान दुई दशमलव पाँच किलोमिटर बाँकी छ ।
टनेलभित्र हावा प्रवाह नहुँदा पानी नबग्ने भएकाले तीन वटा ‘भेन्टिलेटर’ निर्माण गर्ने डिजाइनमा रहेको बताइएको छ । तीनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भइसकेको र एउटा सम्पन्न हुन बाँकी छ । खेर जाने पानीलाई बागमतीमा खसाल्न बागमतीमा भर्‍याङ जस्तै संरचना बनाइने पन्तले जानकारी दिनुभयो । एकै पटक छाड्दा खोलाको पानी धमिलिने हुँदा बहाव कम गर्न भर्‍याङ जस्तै संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
१. साझा मंच साउदीद्वारा सातजना नेपालीलाई राहत सामाग्री
२. दिप्रुङ चुईचुम्माका २५३ परिवारलाई राहत सामाग्री
३. अभिनेत्री मनिषा कोइराला नेपालमा
४. जघन्य घटनाका अपराधीलाई कडा कारवाही गर्न सरकार दृढ : प्रधानमन्त्री ओली
५. हेप्पी फादर डे हेप्पी मदर डे।
६. साउदीमा कोरोना अपडेट: लकडाउन खुकुलो तिर, निको हुनेको संख्या बढ्यो